AMISOM oo leh “Waan baxeynaa 2016” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
AMISOM oo leh “Waan baxeynaa 2016”
A warsame 21 August 2014 23 August 2014
Mareeg.com: Ku simaha wakiilka Midowga Africa ee Soomaaliya ahna masuulka ugu sareeya ee howlgalka AMISOM, Lydia Wanyoto Motend ayaa u sheegtay jaraa’idka kasoo baxaya magalada Kampala New Vision inay ka go’an tahay sidii saraakiisa Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo ciidankooda loo tayayn lahaa si ay ugu fududaato inay Soomaaliya ka baxaan 2016.
Haweenaydan ayaa tilmaamtay inay ka go’antahay howlgalka AMISOM inuu Soomaaliya oo dhan ka baxo 2016 oo uu ku eg yahay waqtigooda balse inta kasii horaysa ay xooga saari doonaan sidii ciidanka DF loo bari lahaa sugida Amniga iyo nidaamka ay ugala wareegayaan howlaha lagula dagalamayo Al Shabab ee xiriirka dhow la leh Al-Qaacida.
“Sida aanu qorsheynayno, waxaan doonaynaa inaan Soomaaliya ka baxo sannadka 2016-ka; waxaana caddeynayaa inaan doonayno inaan xilligaa ka baxno Soomaaliya. Inta ka horreysa muddadaas waxaanu doonaynaa inaan Al-shabaab ka nadiifinno dalka oo dhan. Waxaan dhisi doonnaa awoodaha dowladda Soomaaliya, tanina waa geeddi-socodka aanu higsanayno,” ayay ku tiri Lydia.
Kusimaha madaxa AMISOM ayaa sheegay iney dhowr tababar siiyeen ciidamada Soomaaliya, waxeyna tiri “AMISOM waxay saraakiisha ciidamada Soomaaliya siisay saddex tababar oo ku saabsan howlaha ciidamada, waxaana xoogga lagu saaray sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda aadanaha,”.
Al-Shabab ayaa wali dagaalo toos ah iyo qaraxyo ka gaysanaya gudaha magalada Muqdisho kuwaasoo xitaa saamayn ku yeeshay shaqooyinka ay dowladda Xasan Shiikh Maxamuud ka haysay Muqdisho.
Labo jeer ayay Alshabaab weerar ku qaadeen xarunta Villa Somalia waxayna gaysteen weeraradaasi dhimasho iyo dhaawac iyadoona kii ugu danbeeyay uu lug ku lahaa ruux ka shaqaynayay xarunta Villa Somalia.
Al Shabab ayaa laga saaray Muqdisho 2011 ka dib dagaalo culus oo ay ciidanka iyo madaxdii xiligaasi taladd ahaysan ku qaadaan kooxdan oo hadd ku haray qaar ka mid ah gobaladda dalka.
Balse dadka la socda siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya inay ku adkaan doonta ciidanka DF inay ammaanka la wareegaan 2016 oo ay soo wajahan tahay doorasho la doonaya inay dadwaynaha cadooyeen.
Dalka Angola oo xabsiga dhigay Somaali badan
Mareykanka oo xaqiijinaya wariye madaxa laga jaray